Home » Προτεινόμενα άρθρα
09.05.2020 Category: Προτεινόμενα άρθρα
Ho an’ny mpandainga, ny mailaka dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe παιχνίδι ny Google na ny Yahoo satria malalaka sysy misy fetrany mihitsy amin’ny fametrahana.
Διακομιστής – 5,00 $ / μήνα
– 0,99 $ / μήνα
– manomboka amin’ny 0,80 $ / μήνα
– manomboka amin’ny 3,99 $ / μήνα
– manomboka amin’ny 2,95 $ / μήνα
– manomboka amin’ny 2,96 $ / μήνα
1.1.2 2-Ασφάλεια δεδομένων
2.1 1 – Φιλοξενία Voafandrika (Email + Website)
2.2.1 Ιστότοπος: https://www.namecheap.com Na eo amin’ireo mpampiantrano tranonkala mifototra amin’ny tetibola aza dia i NameCheap no miatrika mora vidy (tsy misy dikany akory) Miaraka amin’ny drafitra fampiantranoana nizara izay ambany hatramin’ny $ 1,44, na dia taminnyny fan ny sasany amin’ireo vidiny ambany indrindra amin’ny orinasa. Ankoatra ny fampiantranoana, NameCheap dia manolotra vokatra hafa παιχνίδι sehatra anarana ary serivisy fiarovana. Ankoatry ny drafitra fampiantranoana lozisialy mora vidy, Namecheap dia manana serivisy serivisy misy serivisy fampiantranoana tsy miankina. Raha kely dia 0,99 $ / μήνα dia afaka mahazo tsy fampiantranoana mailaka ihany fa sehatra hafa fitahirizana rakitra. Miakatra ny vidin’ny miankina amin’ny firy mailaka ilainao. Ιστότοπος: https://www.hostinger.com Ny Hostinger dia miorina ao Kaunas, οποιαδήποτε Litoania ary manolotra karazana fampiantranoana isan-karazany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tranonkala fampiantranoana dia ny fahatongavanao miaraka amin’ny mailaka fampiantranoana. Na inona na inona raha manoratra ianao momba ny drafitra fampiantranoana iombonana na ny VPS hosting, dia nahazo ny mailaka fampiantranoana izy ireo. Sampana: Fampiantranoana mailaka an-tserasera sy voatokana. Hafatra fidirana amin’ny alàlan’ny IMAP / POP / Webmail Kaonty mailaka & mandroso tsy voafetra Miaraka amin’ny mpanjifa rehetra Επιφάνεια εργασίας 5. TMD Φιλοξενία TMD Shared Hosting (izay avy amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka) dia manomboka amin’ny 2,95 $ / μήνα. Mpanenjika ny Υπηρεσίες φιλοξενίας email TMD
2.3 6. Φιλοξενία Α2
3.2 2- Τσίνδριο "Δημιουργώ" hanombohana
5.1 Ahoana ny fametrahana rakitsoratra MX και amin’ny ppanel
5.2 Ahoana ny fametrahana rakitsoratra MX και amin’ny Plesk
5.2.1 1- Mankanesa τυχόν amin’ny ρυθμίσεις DNS
5.3 Δείγματα MX Records
6 Inona no atao hoe SPF Εγγραφή?
6.1 Δείγμα εγγραφών SPF
6.2 Ahoana ny fametrahana rakitsoratra SPF και amin’ny kasety
6.3 Ahoana ny fametrahana rakitsoratra SPF και amin’ny Plesk
6.3.1 1- Πρόσβαση στις ρυθμίσεις DNS
Να τσίμπουλα, να τσακίζω, να στρωτάω, να σαρρότρα, να φωτογραφία και fandraisana an-tserasera. Ny fampiantranoana ny mailaka dia fehezan-teny tena mampihetsi-po ary manondro fotsiny hoe inona ny serivisy manaparitaka ny mailakao. Gmail, ohatra, dia azo raisina ho παιχνίδι ny mailaka fampiantranoana.
Na dia izany aza, ao anatin’ny sehatra amin’ity lahatsoratra it isika dia hihevitra fa mijery ny fampiantranoana ny mailakao ianao. Midika izany fa hifehy tanteraka ny mailakao ianao, amin’ny famoronana adiresy sy fametrahana ny fomba hitantanana azy ireo any amin’izay misy azy ireo.
Rehefa alefa aminao ny mailaka dia misy ny antsipiriany isan-karazany ao anatin’izany ny adiresy mailaka anao. Miorina amin’ilay adiresy io dia alefa any amin’ny toerana fitahirizana izay alefitra handefasana azy ilay mail. Rehefa tonga eo izy dia afaka manokatra sy hamaky azy amin’ny fotoana voafidinao.
Raha nividy tranokala fampiantranoana web ianao dia matetika dia azo inoana fa ny tranonkala fampiantranoana mailaka dia miditra ao amin’ny tranonkala hosting. Raha tsy manana ianao dia mila mitady mailaka fampiantranoana mailaka ianao mba hampiasa domains maimaim-poana amin’ny mailakao.
Misy adiresy mailaka manokana παιχνίδι izao:
Rehefa mampiasa ny mailaka ara-barotra fampiantranoana izay tena resahiko dia mampiasa domains maoderina ho an’ny mailakao. Misy antony maromaro ahafahana επιλέξτε izany manomboka amin’ny fahaiza-manaon’ny professionalism ho an’ny filaminana. Mamolavola fomba fijerin’ny orinasa, ny fandaniana dia tsy mandrara, ary ny tombony dia mavesatra lavitra noho izany.
Εταιρεία Α – [mailaka voaaro]
Εταιρεία Β – [mailaka voaaro]
Amin’ny tranga και amin’ny Company A, dia misy olona afaka misoratra anarana ho an’io adiresy mailaka io raha mbola misy izany.
Amin’ny fampiantranoana ny mailaky ny orinasanao manokana, dia mifehy tanteraka ny fomba fitondràna ny mailaka nalefanao. Ohatra, raha toa ianao ka ao amin’ny orinasa iray misy fitsipika sasantsasany toy ny toerana, angamba mila mitahiry ny mailaka eo amin’ny servurs amin’ny toerana manokana.
Ireo orinasa amin’izao fotoana dia mirona amin’ny fifandraisana amin’ny mailaka. Azo inoana fa ny sasany amin’ireo mailaka ireo dia ahitana fampahalalana manan-danja toy ny faktiora, faktiora, fifanarahana ary ny toy izany. Amin’ny fampiasanao ny fampiantranoana mailaka manokana, dia ho tsara kokoa ianao hiatrehana ireo tranga izay hitranga amin’ny olana an-tserasera.
Ny mailaka πολύ na simba dia meyy fiantraikany lalina eo amin’ny orinasanao ary ny fanohanana izay miaraka amin’ny fandraisam-peo mailaka fandraharahana dia mety hanaporofo fa sarobidy.
Amin’ny maha-orinasa azy, ny mpanjifanao dia tokony ho afaka manam-pinoana amin’ny fahamendrehan’ny orinasanao. Manolotra anao fampahalalam-baovao izay tsiambaratelo, παιχνίδι ny anarana, adiresy mailaka ary mety amin’ny angona ara-bola mihitsy aza. Ny fiarovana ny mailaka dia zava-dehibe ary tokony hijery ireo fepetra tafiditra ao anatin’izany ny fiarovana ny filaminana, ny anti-malware, ny anti-spam ary ny παιχνίδι izany amin’ny mailaka mailaka.
Webmail dia mamela anao hampiasa mpanjifa mailaka mifototra amin’ny web izay tena mety. IMAP dia mamela anao hamaky ny mailaka avy amin’ny fitaovana rehetra tsy mila maka azy ireo. Ny POP amin’ny ankilany dia mitaky ny maak ny mailaka alohan’ny famakiana azy ireo.
Χωρίς μαύρη λίστα
Manana adiresy IP blacklisted dia fomba azo antoka hahitana ny asan’ny orinasa (indrindra fa ny mpanjifa)! Mety ho olana goavana izany satria ny IP anao dia lasa lisitra maintiny dia mitaky fotoana sy ezaka izany mba ahafahana manadio azy indray. Aza avela ho tompon’andraikitra amin’ny mailaka izay manana ny lazany ho an’ny mpanjifanao mahazo lisitra maintimolaly satria mety hiafara amin’ny IP iray ianao ary averina amin’ny lisitra mainty.
Azonao atao ny manamarina ny lisitry ny lisitry ny lisitra mainty hoditra mampiasa MX Εργαλειοθήκη.
1 – Φιλοξενία Voafandrika (Email + Website)
Ny fampiantranoana ny mailaka ifandraisana dia ny fampiantranoana ny mailaka (miaraka amin’ny teny hoe ‘bundled’) ny kaonty web hosting anao. Miankina amin’ny zavatra ilainao, ity dia afaka manampy anao satria tsy mila mitantana ny mailaka amin’ny kaonty manokana na mandoa fanampiny amin’ny mailaka fampiantranoana.
Na izany aza, voafetra ny habaka fampiantranoana ao amin’ny tranonkalan’ny tranonkala ho an’ny tranokalam-pifaneraserana. Ny ankamaroan’ny bundles dia manolotra sehatra iray samihafa izay zaraina eo amin’ny mailaka sy ny tranonkala. Ankoatra ny habaka, mizara ny habetsahan’ny bandwidth natokana ho an’ny kaontinao ianao.
έτσι, ένα – mora ny manorina, ireo singa miavaka, manangona kaonty mailaka kely amin’ny vidiny iray.
Misy mpandraharaha mpanome tolotra παιχνίδι ny Google sy Microsoft izay manana mailaka fampiantranoana vahaolana παιχνίδι ny G Suite sy Microsoft 365 Business. Ireo dia tolotra mailaky ny adiresy izay mora ampiasaina sy matanjaka kanefa mila mitantana samirery avy amin’ny fampiantranoana na dia afaka mampiasa ny anaran’ny anaranao aza izy ireo.
ΝΑΙ ΤΑΧΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΝΙΑ ΤΟ ΦΑΝΤΙΝΑΝ ΦΙΔΙΑΝΝΑΝΑ ΤΣΑΡΑΤΣΑΡΑ ΚΟΚΟΑ ΡΑΧΑ ΝΥ ΦΟΤΟΜΠΟΝΝΗ ΜΠΑΚΑ Ohatra, G Suite dia mety mitentina 5,40 $ an anny drafitra fototra, fa izany no vidin’ny karaman’ny mpampiasa isam-bolana.
Ny InterServer dia miorina ao New Jersey ary efa ho roapolo taona mahery izao – fiainana maharitra mahatalanjona ho an’ny tranonkala iray. Ny voalohany dia nampidirina ho παιχνίδι ny kaonty fananganana virtoaly virtoaly ny androany dia mandrakotra ny habaka rehetra amin’ny tranonkala fampiantranoana tranonkala.
Na eo amin’ireo mpampiantrano tranonkala mifototra amin’ny tetibola aza dia i NameCheap no miatrika mora vidy (tsy misy dikany akory) Miaraka amin’ny drafitra fampiantranoana nizara izay ambany hatramin’ny $ 1,44, na dia taminnyny fan ny sasany amin’ireo vidiny ambany indrindra amin’ny orinasa. Ankoatra ny fampiantranoana, NameCheap dia manolotra vokatra hafa παιχνίδι sehatra anarana ary serivisy fiarovana.
Ankoatry ny drafitra fampiantranoana lozisialy mora vidy, Namecheap dia manana serivisy serivisy misy serivisy fampiantranoana tsy miankina. Raha kely dia 0,99 $ / μήνα dia afaka mahazo tsy fampiantranoana mailaka ihany fa sehatra hafa fitahirizana rakitra. Miakatra ny vidin’ny miankina amin’ny firy mailaka ilainao.
Ny Hostinger dia miorina ao Kaunas, οποιαδήποτε Litoania ary manolotra karazana fampiantranoana isan-karazany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tranonkala fampiantranoana dia ny fahatongavanao miaraka amin’ny mailaka fampiantranoana. Na inona na inona raha manoratra ianao momba ny drafitra fampiantranoana iombonana na ny VPS hosting, dia nahazo ny mailaka fampiantranoana izy ireo.
Miaraka amin’ny mpanjifa rehetra Επιφάνεια εργασίας
5. TMD Φιλοξενία
TMD Shared Hosting (izay avy amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka) dia manomboka amin’ny 2,95 $ / μήνα.
Mpanenjika ny Υπηρεσίες φιλοξενίας email TMD
Προφίλ SpamExperts mpilalao spam
6. Φιλοξενία Α2
Azonao ampidinina ny mailaka και amin’ny 25 ao amin’ny A2 Lite Plan (2,96 $ / mo) na ny lahatahiry tsy voafetra ao amin’ny A2 Swift (3,70 $ / mo) na ny Turbo Hosting (7,03 $ / μήνα).
Fa maninona no mampiantrano mailaka miaraka amin’ny A2 Φιλοξενία:
Alefaso amin’ny adiresy imailaka 25 miaraka amin’ny tetikasa πακέτο
Midira ao amin’ny kaontinao cPanel ary kitiho ny ‘Λογαριασμοί email’.
2- Τσίνδριο "Δημιουργώ" hanombohana
2.2) Tsindrio ny «Δημιουργία» hanombohana manangana adiresy mailaka vaovao.
3.1) Manorata anarana manokana ho an’ny adiresy imailaka izay noforoninao. Amin’ny ankapobeny dia noforonina mba hampisaintsainana mailaka orinasa manokana toy ny [mailaka voaaro] na amin’ny maha solontenan’ny orinasam-pandraharahana παιχνίδι ny [mailaka voaaro]
3.4) Raha tsy afaka mieritreritra ny tenimiafina mahery ianao na tsy mahatoky, tsindrio ny bokotra «Manomeza» ary ny rafitra dia hanamarika ny tenimiafina mafy ho anao. Ataovy azo antoka fa mahamarika izany ianao!
3.7) Rehefa vita izany dia tsidiho ny bokotra «Δημιουργία» ary vita ianao!
1.2) Ny rindran-damba eo ankavanana dia hampiseho ny efijery voalaza. Tsindrio eo amin’ny “Δημιουργία διεύθυνσης email” hanombohana ny dingana fanoratana.
2.1) Mampidira adiresy mailaka tokana ato. Io anarana io dia tsy maintsy miavaka satria ny alàlan’ny mailaka dia tsy mamela ny anarana duplicate amin’ny sehatra iray ihany.
2.5) Mampidira indray και tenimiafina indray. Izany no fomba fiasan’ny rafitra hahazoana antoka fa mahatsiaro ny tenimiao marina ianao na mamela anao hanamarina izany raha toa ka misy typo iray natao.
2.7) Raha vao tafiditra daholo ireo saha ilaina, dia tsindrio ny ‘Done’ ary ny adiresy mailaka dia ho vonona. Raha tsy namorona ity mailaka ity ianao, tsarovy ny handefa ny antsipiriannyny angon-drakitra amin’ilay olona noforoninao ity kaonty mailaka ity.
Mail Exchange (MX) firaketana dia karazana firaketana DNS. Nasehon’izy ireo an-tsoratra ny toerana nandefasan’ny mailaka anao. Tsy παιχνίδι ny adiresy mailaka izay tsy maintsy noforonina isaky ny maniry vaovao ianao dia mila apetraka indray mandeha isaky ny sehatra iray.
Misy singa roa amin’ny rakitsoratra MX; Προτεραιότητα και προορισμός.
laharam-pahamehana – Raha manana rakitra MX mihoatra ny iray ianao, ny laharam-pahamehana dia mamela anao hametraka izay nomena. Ny isa kely dia hanondro laharam-pahamehana kokoa. Ohatra, raha manana rakitra MX roa ianao ary ny iray dia napetraka amin’ny Priorité 10 sy ny iray hafa 20, ny iray amin’ny Priority 10 dia homena laharana.
Προορισμός – Δεν είναι dikan-dikan-dikan-drakitry ny anaran’ny sehatra miasa. Amin’ny alalan’ny namana mahafinaritra dia midika izany fasy mety adiresy IP izany, fa ny anarana mifandraika amin’io IP io.
Ahoana ny fametrahana rakitsoratra MX και amin’ny ppanel
1.1) Midira και amin’ny cPanel ary horonan-taratasy mandra-pahatonganao any amin’ny sehatra ‘Domains’. Tsindrio eo amin’ny “Zone Editor”.
2.2) Tsindrio ny ‘MX Record’ mba hanombohana ny fizotry ny thinkakirana ho an’ny MX Record vaovao.
3.2) Το Mampidira θαυμάσιο Destina. Ny mahazatra dia manamarika izany ho mail.yourdomain.com ka manondro fa rakitsoratra MX ho an’ny mpizara mailaka izany. Raha vantany vao vita ianao dia tsindrio ny «Προσθήκη εγγραφής MX».
Ahoana ny fametrahana rakitsoratra MX και amin’ny Plesk
1- Mankanesa τυχόν amin’ny ρυθμίσεις DNS
1.1) Eo amin’ny zoronnyny fikandrana ankavia, kitiho eo amin’ny tranonkala sy sehatra. Eo amin’ny tontonana ankavanana, mandehana mankany amin’ny sehatra tianao te hamorona Record MX ho anao ary tsindrio ny ‘Ρυθμίσεις DNS’.
2.1) Tsindrio ny ‘Προσθήκη εγγραφής’ eo amin’ny sehatra hijery tsara.
3.1) Ity dia lisitry ny karazan-drakitra azonao noforonina. Tsindrio eo ary mifidiana «MX».
3.3) Avy amin’ny lisitra fidirana, misafidy ny laharam-pahamehana nomena amin’ity mailaka ity. Tsy mila manamboatra izany ianao raha tsy manana mihoatra ny MX Εγγραφή ianao. Rehefa vita izany dia tsindrio ny ‘OK’ ary ny rakitra MX dia hatao.
Δείγματα MX Records
Δείγμα – rakitsoratra MX an’ny WebHostingSecretRevealed.net.
Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny rakitra MX dia tsy maintsy manondro ny anaran’ny mpampiasa mailaka – fa tsy ny adiresy IP. Ireto misy ohatra sasantsasany amin’ny MX Records μαρίνα;
Inona no atao hoe SPF Εγγραφή?
A Rakitsoratry ny mpandefa politika (SPF) manondro inona ireo mpizara mailaka azon’izy ireo ampiasaina handefasana mailaka ny sehatra misy anao. Amin’ny ankapobeny dia voafaritra ao amin’ny DNS ao amin’ny kaontinao fampiantranoana tranonkala ary voatahiry ho TXT Εγγραφές.
Ny SPF Εγγραφή foana amin’ny ‘v =’ izay fampiasa SPF ampiasaina. Ny tenah mahazatra dia ny ‘spf1’ ary ankatoavin’ny ankamaroan’ny olona amin’izao fotoana izao. Ny zava-drehetra manaraka ny ‘v =’ δείκτης dia ny fitsipika izay mamaritra ny fampiantranoana na tsy navela hanisy mailaka avy amin’ny sehatra misy anao.
Ary famaritana παιχνίδι ny hoe:
– για αποτυχία
? για ουδέτερο
Δείγμα εγγραφών SPF
v = spf1 dia manondro ny έκδοση SPF
Ahoana ny fametrahana rakitsoratra SPF και amin’ny kasety
2.1) Πανελλαδικό πάνελ, ny main-zone Zone Editor dia manome anao fotsiny ny fahafahana mamorona na manova karazana rakitra 3; Α, CNAME ary MX. Mba hamoronana rakitsoratra TXT momba ny SPF Records dia mila tsindrio ny «Διαχείριση» ianao mba hiditra ao amin’ny faritra lehibe.
3.1) Eo amin’ny ilany ankavanan’ny efijery dia misy ny menio fanala izay ahafahanao misafidy ny karazan-tsoratra tianao hotratrarina. Afindrao ny lisitra ary tsindrio ny «Προσθήκη εγγραφής TXT».
3.2) Eo ambanin’ny pejin’ny ‘Records’ dia ahafahanao miditra / mametraka ny famaritana ny rakitra SPF. Rehefa vita izany dia tsindrio ny «Προσθήκη εγγραφής».
Ahoana ny fametrahana rakitsoratra SPF και amin’ny Plesk
1- Πρόσβαση στις ρυθμίσεις DNS
1.1) Ao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso ny Plesk, tsindrio ny ‘tranonkala & ny sehatra ‘eo amin’ny lalana hidina ankavia. Eo amin’ny lafiny ankavanan’ny tontonana eo ankaviana amin’ny bokotra ‘Ρυθμίσεις DNS’.
2.1) Indray mandeha amin’ny faritra Ρυθμίσεις DNS dia tsindrio ny ‘Προσθήκη εγγραφής’.
3.1. Παρουσίαση του μενού Avy ao amin’ny, tsindrio ny karazan-tsoratra TXT.
3.2. Ampidiro eto ny famaritana SPF anao eto ary tsindrio ny «OK». Vita ianao!
Ny Gmail για επιχειρήσεις και μια άλλη G Suite και Google. Mampalahelo fa tsy maimaim-poana ny G Suite ary miara-miasa isam-bolana manomboka amin’ny $ 6 / mo / mpampiasa. Misy fe-potoana fanombohana fitsapana maimaimpoana 14 andro.
Ho an’ny orinasa kely kokoa, Hostinger dia manolotra vidiny tsara ho an’ny vola misy ambany amboniny, manomboka amin’ny $ 0,99 / μήνα.
Ny fananganana kaonty mailaka dia matetika atao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso fampiantranoana anao. Amin’ny ankapobeny, ny fametrahana kaonty mailaka dia tsotra παιχνίδι ny famoronana anarana ao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso mailaka, avy eo ny fametrahana fetra amin’ny haben’ny kaonty.
Ny fananganana kaonty mailaka tsirairay dia mora tsotra ary raha manaraka ny dingana voalaza eto ianao dia tony tokony hisy olana lehibe. Na izany aza, tadidio fa ny fanohanana teknolojika dia matetika mailaka fotsiny – izay mitondra ahy any amin’ny teboka farany.
Για τον απλό, το email συσχετίζεται συνήθως με μεγάλους παρόχους όπως το Google ή
Ho an’ny mpandainga, ny mailaka dia matematika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe igračka ny Google
Ho an’ny mpandainga, ny maila dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe lelu ny Google
Bagaimana pun juga, silakan kirim email ke matassimate amin’ireo mpamatsy lehibe toy ny Google
A Finday ny legjobb e-mail címe és megtudhatja, hogyan állíthatja be üzleti e-mailjét
Ho an’ny mpandainga, ny maila dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe játék ny Google
Ho un mpandainga, ny mailaka dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe toy di Google
קומאהה ג’ייון חיג’י דינה-פוסט גאמבר גלרי בוורדפרס
Cara Memonetisasi Situs Anda dengan Membuat Lokakarya Daring Pertama Anda
5 قوانین سریع نسخه نویسی بلاگ ها را منتشر کنید
वर्डप्रेस बनाम DIY वेबसाइट बिल्डर्स: Iza no tokony hampiasainao?